ऊर्जा सिस्टेम आउटडोर बक्स स्ट्रीट स्पीकर समीक्षा | ग्याजेट समाचार
ऊर्जा सिस्टेम आउटडोर बक्स स्ट्रीट स्पिकरको विश्लेषण
आज हामी तपाईलाई यस छुट्टीको मौसमको लागि एकदमै रोचक समीक्षा दिन्छौं। यदि तपाइँ ती मध्ये एक हुनुहुन्छ जसलाई तपाइँको जीवनमा संगीत चाहिन्छ र तपाइँ यसलाई कहिँ पनि लिन चाहानुहुन्छ, यस समीक्षालाई नबिर्सनुहोस्। हामीले ऊर्जा सिस्टेमबाट आउटडोर बक्स स्ट्रीट स्पिकर परीक्षण गरेका छौं, सबै क्षेत्र आउटडोरको लागि डिजाइन गरिएको केही समयको लागि ब्याट्रीको साथ।
पावर, ब्याट्री र पोर्टेबिलिटी यस मजबूत वक्ताको मुख्य विशेषताहरू हुन्। सुविधाहरू छोड्नुहोस् ताकि तपाईंसँग घण्टाको अभाव वा अत्यधिक inopportune क्षणमा ब्याट्रीको सञ्चालन हुँदैन। Energy Sistem हामीलाई प्रदान गर्दछ हामीसँग रहनको लागि सक्षम वक्ता जहाँसुकै हामी यसलाई लिन चाहन्छौं।
1 आउटडोर बक्स स्ट्रीट, केही समयको लागि शक्ति र स्वायत्तता
2 सबै चारै तिर आउटडोर शैली
3 आउटडोर बक्स स्ट्रीट स्पिकरको साथ सबैका लागि ब्याट्री
4 शक्ति र ध्वनि गुणस्तर
5 प्राविधिक विशिष्टताहरू ऊर्जा सिस्टेम आउटडोर बक्स स्ट्रिट
आउटडोर बक्स स्ट्रीट, केही समयको लागि शक्ति र स्वायत्तता
हामी बाहिर जाँदा, यात्रा गर्दै, बार्बेक्यूज, समुद्री किनार, पहाडहरू, छोटकरीमा, छुट्टीहरूको मितिहरूमा छौं। र यो एक उत्तम समय हो हाम्रो मनपर्ने संगीत बाहिर मजा लिन। संगीत साथीहरूसँग हाम्रा मिल्दोजुल्दो अवसरहरू पहिले भन्दा सजिलो छ। र अब आउटडोर बक्स स्ट्रीट स्पिकरको साथ, हामी यसलाई उत्तम तरिकाले गर्न सक्दछौं सम्भव छ।
यदि तपाईं उत्तम स्पिकरको खोजीमा हुनुहुन्छ भने तपाईंको संगीतको अन्त कतै जानको लागि, आज हामी तपाईंलाई विचार गर्नको लागि विकल्प दिन्छौं। A मजबूत उपकरण जससँग तपाइँ दाग, स्क्रैचिंग वा भिजेको बारेमा चिन्ता गर्नुहुन्न। ऊर्जा सिस्टेम र यो स्पिकरले हामीलाई केवल गीत नै उत्तम रोज्ने छनौटको बारेमा चिन्ता लिनु पर्छ। अमेजन मा किन्नुहोस् ऊर्जा सिस्टेम आउटडोर बक्स सडक नि: शुल्क शिपिंगको साथ।
सबै चारै तिर आउटडोर शैली
ऊर्जा सिस्टेम आउटडोर बक्स स्ट्रीट लाउडस्पीकर यसको नाममा बाँच्दछ। तत्वहरूको प्रतिरोध गर्न कल्पित र निर्मित यो एक मजबूत उपस्थिति छ। तिनीहरूको सीधा लाइनहरु, कोणीय अन्त्य र रबर सामग्री संग तपाइँको सम्पूर्ण शरीर लाईनिंग नरम एक रबड उपकरण को प्रतिनिधित्व।
र कठोरता केवल दृश्यमा सीमित छैन। यो पहिलो नजरमा देखा पर्दा, ऊर्जा सिस्टेम आउटडोर बक्स स्ट्रिट सडकमा हुनको लागि डिजाइन गरिएको हो। सदमे प्रतिरोध र छीन प्रतिरोध जब हामी हाम्रो संगीतको साथ जान चाहन्छौं त्यहाँ लैजानको लागि सक्षम हुन आउँदा यसका दुई महत्त्वपूर्ण विशेषताहरू मध्ये दुई हुन्।
यदि तपाईंले यसको माथिल्लो भाग हेर्नुभयो भने, तपाईंको आँखा समात्ने पहिलो चीज यसको ह्यान्डल हो। एक तत्व जसले ती ध्वनि प्रणालीहरूको सम्झना दिलाउँछ जुन s० को दशकमा यति धेरै आवाज लाग्यो। रबर मेटल ह्याण्डल लाइनर त्यो केहि रेट्रो लुक प्रदान गर्दछ, र एकै समयमा यो धेरै व्यावहारिक छ.
उपकरणमा नै हामी फेला पार्दछौं पाँच भौतिक बटनहरू यसले हामीलाई मैन्युअल रूपले स्पिकर प्रयोग गर्न अनुमति दिन्छ। टांक खुला बन्द, एक बटन मोड चयन गर्नुहोस् जहाँ हामी यसलाई प्रयोग गर्न चाहन्छौं। को प्ले / पज बटन। का लागि बटन भोल्यूम नियन्त्रण। Y एलईडी फ्ल्यासलाइट सक्रिय गर्न प्रयोग गरिएको अन्तिम बटन यसको एक छेउमा रहेको यसको साथ।
यसको पक्षमा, विशेष रूपमा दायाँमा, हामीले छलफल गरेजस्तै, त्यहाँ छ 400 एलईएम पावरको साथ शक्तिशाली एलईडी फ्ल्यासलाइट। एउटा रोचक अतिरिक्त यदि हामी यसलाई क्याम्पसाइटमा वा समुद्र तटमा प्रयोग गर्दछौं जुन यो अँध्यारो हुन थाल्छ। यो स्पिकर धेरै भन्दा बहुमुखी छ, र हामी हेर्छौं यो कुनै पनि परिस्थितिको लागि तयार छ।
मा बाँया पट्टि हामीले एउटा आवरण भेट्यौं जुन विभिन्न प्रकारको जडानहरू लुकाउँदछ। हामी संग छ दुई USB पोर्टहरू ती दुबै एक उपकरण जडान गर्न, र हाम्रो स्मार्टफोन चार्ज गर्न एक पावर बैंक को रूप मा आउटडोर बक्स सडक को उपयोग गर्न को सेवा। तपाईं पाउनुहुनेछ वर्तमान चार्ज इनपुट पोर्ट। संयुक्त राष्ट्र Mm.mm मीमी ज्याक प्लग। र पनि एक एक मेमोरी कार्ड सम्मिलित गर्न को लागी स्लट माइक्रो एसडी।
आउटडोर बक्स स्ट्रीट स्पिकरको साथ सबैका लागि ब्याट्री
स्पिकरले गर्न सक्ने आवाजको साथै, वा हामीलाई यसको डिजाइन मनपर्दछ, हामीले ध्यानाकर्षण गर्ने एउटा चीज योको ब्याट्री हो। तपाईले हामीलाई कहिँ पनि घण्टासम्म बिजुली उर्जा कनेक्शनको आवश्यकता बिना साथ गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा धेरै महत्त्वपूर्ण छ। र ऊर्जा सिस्टेम आउटडोर बक्स स्ट्रीट पूर्ण रूपमा यस आवश्यकतालाई पूरा गर्दछ।
अमेजनमा शिपिंग लागत बिना ऊर्जा सिस्टेम आउटडोर बक्स स्ट्रीट खरीद गर्नुहोस्
यो एक संग सुसज्जित आउँछ लिथियम-आयन ब्याट्री 4.400 एमएएच क्षमताको साथ। एउटा लोड जुन प्राइमरी सानो देखिन्छ यदि हामी यसलाई स्मार्टफोनको पहिले नै भएकासँग तुलना गर्यौं भने। जे होस् हामीलाई थाहा छ कि यो उपभोगसँग तुलना गर्न सकिदैन जुन फोनसँग मात्र यसको स्क्रीनसँग हुन्छ। ,,4.400०० एमएएच तिनीहरूले हामीलाई १ 14 घण्टासम्म प्लेब्याक प्रदान गर्छन् निरन्तर संगीत। के तपाईको पार्टीहरु लामो समय सम्म रहन्छ?
El लोड हुने समय ब्याट्री १००% तयार हुनको लागि, यसले हामीलाई केही बेर लिन्छ किनकि यो अप गर्न आवश्यक पर्दछ5घण्टा। यद्यपि हामीले त्यो जान्नुपर्दछ हामी चार्जरमा जडित स्पिकर प्रयोग गर्न सक्छौं समस्या छैन। यसका साथै, हामी यस अवस्थामा फेला पार्दछौं १. meters मिटरको केबल चार्ज गर्दै, जसले स्पिकरलाई स्थिति सजिलो बनाउँदछ।
यसको उदार ब्याट्री को लागी धन्यवाद हामी यसको आउटडोर बक्स स्ट्रीट फ्ल्यासलाइटको रूपमा यसको शक्तिशाली एलईडी प्रकाशको लागि धन्यवाद प्रयोग गर्न सक्दछौं। वा यो उद्देश्यका लागि सक्षम गरिएको USB पोर्ट प्रयोग गरी कुनै पनि उपकरण चार्ज गर्नुहोस्।
शक्ति र ध्वनि गुणस्तर
शक्ति पक्ष पनि यस स्पिकरको शक्तिहरू मध्ये एक हो। ऊर्जा सिस्टेमले आउटडोर बक्स स्ट्रीटको साथ प्रदान गरेको छ 50w को एक शक्ति। यसले यसलाई बजारको सब भन्दा शक्तिशाली पोर्टेबल स्पिकरहरू बनाउँदछ। र यो पहिलो स्थानमा रहन्छ यदि कुनै श without्का बिना हामी यसमा सम्मिलित हुन्छौं भने गुणस्तर र मूल्य बीच उत्कृष्ट सम्बन्ध यो उपकरण प्रस्ताव गर्दछ।
त्यो पाउनुको अलावा संगीत राम्रो सुनिन्छधेरै यो धेरै चर्को सुनिन्छ। बासको आवाज तीव्र छ र यसको कम्पन कुनै पनि समय विकृत नगरी परिभाषाको साथ बुझिन्छ। तपाईं आफ्नो कुञ्जीलाई अन्तिम कुनामा ध्वनी गर्न सक्नुहुनेछ पावरको लागि धन्यवाद छ वास्तवमा राम्रो सुन्ने अनुभव.
प्राविधिक विशिष्टताहरू ऊर्जा सिस्टेम आउटडोर बक्स स्ट्रिट
मोडेल आउटडोर बक्स स्ट्रीट
ध्वनी प्रणाली स्टेरियो २.१
पोटेरिया 50 डब्ल्यू
कनेक्टिविटी USB - माइक्रो एसडी - 3.5.। ज्याक
पुग्नुहोस् 10 मीटर
ब्याट्री 4.400 mAh
स्वायत्तता Hours घण्टा सम्म
चार्ज समय5घण्टा
आयामहरू 345 x 170 x 103 मिमी
वजन 2.1 किलो
मूल्य 119.00 €
लि link्क खरीद गर्नुहोस् ऊर्जा सिस्टेम आउटडोर बक्स सडक
Hours० घण्टाको स्वायत्तता
शक र स्प्लेश प्रतिरोध
केहि ठूलो आकार मा एक यात्रा मा लिन
लेखको पूर्ण मार्ग: ग्याजेट समाचार » सामान्य » समीक्षा » ऊर्जा सिस्टेम आउटडोर बक्स स्ट्रीट स्पिकरको विश्लेषण
LG 32QK500-W एक QHD मोनिटर एक चाखलाग्दो मूल्यमा, हामीले यसलाई जाँच्यौं
इन्स्टाग्राममा कसैलाई कसरी भेट्ने